11 x 21 Podcast: Amahemuhemu namahemuhemu amaningi | Ngivela kwa-mac
I-Podcast 11 x 21: Amahemuhemu namahemuhemu amaningi
Isonto elinamandla nezindaba eziningana ezivela ku-Apple futhi ngaphezu kwakho konke amahemuhemu wokuthi yini engase ifike ngoMashi olandelayo ngaphezu kwe-coronavirus ejabule eqhubeka nokuba ngumlingisi ophambili ezindabeni zansuku zonke. Ukubeka lesi sihloko eceleni vele simagange ukubona ukuthi inkampani yeCupertino ingasethulela ini kungekudala Futhi ngukuthi amahemuhemu akhuluma ngemikhiqizo eminingi, siyethemba kanjalo.
Kwaziswa njalo ukwabelana nawe ngobusuku obubukhoma esiteshini sethu se-YouTube futhi kuleli sonto bekungeke kwehluke ngoba ababambiqhaza abaningi bahlala engxoxweni ye-YouTube. Manje labo abangakwazanga ukuhlanganyela nathi sebenayo i-podcast yokulalela noma nini nanoma kuphi lapho befuna khona.
Sishiya isixhumanisi se- ividiyo ebukhoma kusuka ku-podcast yayizolo:
Uma ufuna ungasilandela siphile njalo ngoLwesibili ebusuku, ngqo kusuka isiteshi sethu ku-YouTube, noma linda amahora ambalwa, kuze kutholakale umsindo we-podcast nge-iTunes, Njengenjwayelo. Uma unenkinga, ukungabaza noma isiphakamiso se-podcast yethu ungabeka amazwana kuyo bukhoma ngengxoxo etholakala ku-YouTube, usebenzisa i-hashtag #podcastapple ku-Twitter noma kusuka isiteshi sethu seTelegram okuyi imahhala futhi ivulekele wonke umuntu.
Futhi futhi kufanele sibonge wonke umuntu okhona ngenkampani yakho kulokhu kukhula okunamandla, Abasebenzisi abaningi bayahlangana nathi bukhoma futhi usibuza ngqo mayelana nobuchwepheshe be-Apple, imikhiqizo yayo kanye nezinye izindaba ezingahlobene ngqo ne-Apple. Eqenjini kuyintokozo enkulu ukwaba konke okuhlangenwe nakho kwethu nokwazi okwakho, siyethemba ukuthi lo mphakathi wabasebenzisi uyaqhubeka nokwanda usuku nosuku.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » I-Podcast 11 x 21: Amahemuhemu namahemuhemu amaningi
Vala ngokushesha i-Chrome ngesinqamuleli cmd + Q
I-Twitter ithuthukisa ukuhambisana kwayo neMac Touch Bar